2020-02-12 14:23:47 , 2020 Internship Training …
Job Vacancy in Myanmar
Job vacancies in Yangon and Myanmar
? 2020 Internship Training ?
…Internship ဆင်းဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေပြီလား❓
…သင်တန်းမှာ Intern ဆင်းလိုက်ရင် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံတွေရ ပါ့မလား❓
…ကျောင်း intern project ရောပြီးအောင် ရေးနိုင်ပါ့မလား❓
…လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နိုင်တဲ့ အထိရော တတ်မြောက်ပါ့မလား❓
" ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ မိမိ Major နဲ့ဆိုင်တဲ့ Developer အလုပ်ကို လုပ်ချင်ပေမဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်နေတတ်ကြသလို သင်တန်းတက်ရင်ကောင်းမလား အိမ်ပဲပြန်ရတော့မလားလို့လဲ ခေါင်းရှုပ်တတ်ကြပါတယ်"
✅Intern ဆင်းရမဲ့အချိန်မှာ သင်တန်းမှ Internship Training ကိုတက်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေလဲရ ကျောင်းပြီးသွားရင်လဲ သင်တန်းထပ်တက်စရာမလိုပဲ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။
✅Best & Bright Institute မှာ Programming language ရဲ့ Basic မှစသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြေခံကစ သိရှိနားလည်သွားမှာဖြစ်ပြီး Group project တွေပါလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Presentation skill, လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ teamwork skill, communication skill တွေကို ကောင်းမွန်စေသလို knowledge sharing လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုပါ တိုးတက်စေမှာပါ။
✅Group project ရေးသားချိန်တွင် မိမိအတွေးအခေါ်များနှင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ 6နှစ်7နှစ် ရှိ ဆရာများက guide line လုပ်ပေးတာကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ရသလိုပဲ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရမှာဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှုတွေရှိလာစေမှာပါ။
✅မိမိကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့် project ကိုပြီးဆုံးအောင်ရေးသားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ခက်ခဲပင်ပန်းပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ချိန်တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရုံသာမက interview ဖြေဆိုချိန်တွင်လည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
✅Intern ပြီးသွားချိန် မိမိရဲ့ Skill ယုံကြည်မှုကို ထပ်ပြီးတိုးမြင့်လို၍ Personal Project ရေးလိုပါကလည်း သင်တန်းတွင် အခမဲ့ လာရောက်ရေးနိုင်ပြီး ဆရာများဆီမှ အကြံဉာဏ်ကောင်းများရယူနိုင်ပါတယ်။
✅ တိုးတက်မှုမရှိပဲ ပြန်သွားရတယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် လူဦးရေ အကန့်အသတ်နဲ့သာ လက်ခံတာဖြစ်ပြီး ဆရာများမှ အနီးကပ် သင်ကြားပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
✅သင်တန်းချိန်မှာ တစ်ပတ်ကို (၅) ရက် Mon to Fri တက်ရမှာဖြစ်သည့်အပြင် မနက် 9:00 AM မှ ညနေ 5:00 PM ထိတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာသင်ယူချိန် အမျာကြီးရပါတယ်။
✅နေထိုင်ရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက်လည်း သင်တန်းမှ နေစရာ ရှာပေးပါတယ်။
✅ဒါ့အပြင် သင်တန်းမှလဲ အခမဲ့ Interview များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
✅ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် မိဘများအဆင်ပြေစေရန် သင်တန်းကြေးကို အရစ်ကျ ပေးချေနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
✅အောက်ပါ Courses များမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Course ကိုရွေးချယ်၍ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်
?Java Spring Web Development Course
?Asp.Net Core Web Development Course
?Android Application Development Course
? PHP Web Development Course
?Day – Mon to Fri
⏰Time – 9:00 AM – 5:00 PM
⏰Duration –3Months
?Fee – 300,000 ks
?Start Date – May – 2020
?Internship လျောက်ထားလိုပါက အောက်ပါ Link တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်
?လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် 10% စရံ ကြိုသွင်းခြင်းဖြင့် confirm ယူပါမည်။
အမှတ် (၁၅၂)၊ ၄ လွှာ ၊ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ (ဆိုက်ကားဂိတ်မှတ်တိုင် အနီး)
ဖုန်းနံပါတ်. 09 959512838 ,09 762424229 သို့
This entry was posted in Training and Class on 2020-02-12 by admin.
← 2020-02-10 21:40:57 , ကဲ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Petty Cas… 2020-02-18 13:39:26 , #Accounting အပိုင်းနဲ့ အင်တာဗျ… →
2020-04-10 11:14:04 , စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားသောလူငယ်မျ…
2020-04-05 21:10:48 , တင္ခြင့္ျပဳပါ Admin AUTOCAD U…
2020-04-02 19:10:25 , Admin တင္ခြင့္ျပဳေပးပါ။ AUTOC…
2020-03-30 15:06:53 , Admin တင္ခြင့္ျပဳပါ။ Basic Au…
Training and Class